Iindaba -Umahluko phakathi kwamalaphu ahlukeneyo, Kutheni le nto Amalaphu eAntistatic ekhetha iPolyester?
Ngokuqhelekileyo yaziwa ngokuba ngumqhaphu. Ifayibha isetyenziselwa ukwenza ilaphu kunye ne-quilt. Ifayibha yomqhaphu inamandla aphezulu, ukungena komoya okuhle, ukunganyangeki kombimbi kunye nepropathi eqine kakubi; inokumelana kakuhle nobushushu, yesibini kuphela kwi-hemp; inokuxhathisa kwe-asidi, kwaye iyamelana nokunyibilikisa ialkali kwiqondo lobushushu begumbi; inobuhlobo obuhle kwiidayi, kulula ukuba idayi, i-chromatogram epheleleyo kunye nombala oqaqambileyo. Uhlobo lwelaphu lomqhaphu lubhekisa kwilaphu elenziwe ngomsonto womqhaphu okanye umqhaphu kunye nomqhaphu uhlobo lwemichiza yefayibha edityanisiweyo.
Iimpawu zamalaphu omqhaphu:
1. Ine-hygroscopicity eyomeleleyo kunye nokuncipha okukhulu, malunga ne-4-10%.
2. Ukumelana nealkali kunye neasidi. Ilaphu lomqhaphu aluzinzanga kwi-acid engaphiliyo, nokuba inyibilike kakhulu i-asidi ye-sulfuric iyakutshabalalisa, kodwa i-asidi ye-organic ibuthathaka, phantse ayinasiphumo sonakalisayo. Ilaphu lomqhaphu alunako ukumelana nealkali. Ngokubanzi, ukungxengxeza kwealkali ayinampembelelo kwilaphu lomqhaphu kubushushu begumbi, kodwa amandla elaphu lomqhaphu aya kuncipha emva kwempembelelo enamandla yealkali. Ilaphu "elinemercerized" lomqhaphu lingafunyanwa ngokunyanga ilaphu lomqhaphu nge-20% yesoda.
3. Ukuxhathisa ukukhanya kunye nokumelana nobushushu kuqhelekile. Elangeni nakwiatmosfera, ilaphu lekotoni liya kongezwa kancinci, nto leyo eya kuthi inciphise amandla. Ilaphu lomqhaphu liya konakaliswa lixesha elide lobushushu, kodwa liyakwazi ukumelana nexesha elifutshane kunyango lobushushu oluphezulu lwe-125 ~ 150 ℃.
4. I-Microorganism inefuthe elonakalisayo kwilaphu lekotoni. Ayikwazi ukumelana nokubumba.
Ipholiyesta yomqhaphu luhlobo lwelaphu elixutywe nomqhaphu kunye nepholiyesta. Iqukethe ikotoni encinci. Iimpawu zepolyester yomqhaphu zinezinto zombini eziluncedo zomqhaphu kunye nepholiyesta. Ngaba ifayibha yomqhaphu ingumxube wekotoni kunye nenayiloni? Ifayibha yomqhaphu luhlobo lwefiber polypropylene eguqulweyo. Isiphumo sokufunxa esingundoqo sefayibha yomqhaphu siyenza ithambe, ifudumale, yomile, isempilweni kunye ne-antibacterial. Impahla yangaphantsi yomqhaphu, impahla yangaphantsi, ibhatyi, isikipa kunye nezinye iimveliso eziphuculweyo kwaye zaveliswa yimodeli eluncedo zinenzuzo yokulondolozwa kobushushu, ukufunxwa kwamanzi, ukuhanjiswa kokufuma, ukomiswa ngokukhawuleza, intsholongwane kunye nezinye iipropathi.
I-Spandex sisishunqulelo se-fiber polyurethane, eluhlobo lwefayibha yelastiki. I-elastic kakhulu kwaye iyolula amaxesha angama-6-7, kodwa inokubuyela ngokukhawuleza kwimeko yayo yokunyamalala koxinzelelo. Ubume bayo beemolekyuli yityathanga elifana, ithambile kwaye iyandiswa i-polyurethane, eyandisa iipropathi zayo ngokudibanisa necandelo elinzima leetyathanga.
I-Spandex ine-elasticity efanelekileyo. Amandla aphindwe kabini kunamafayibha e-latex, uxinizelelo lomgama nawo ucolile, kwaye uyamelana nokuthotywa kweekhemikhali. I-Spandex ine-asidi elungileyo kunye nokumelana ne-alkali, ukumelana nokubila, ukumelana namanzi olwandle, ukomelela kokucoca okomileyo kunye nokumelana nokunxiba. Ngokucacileyo iSpandex ayisetyenziswanga yodwa, kodwa isixa sayo esincinci sixutywe kwilaphu. Olu hlobo lwefayibha lineepropathi zombini zerabha kunye nefayibha, uninzi lwazo lusetyenziswa kumsonto osontiweyo osikiweyo kunye ne-spandex njengombindi. Ikwanayo ne-spandex ye-silk ehamba ze kunye nesilika ejijekileyo eyenziwe nge-spandex kunye neminye imicu. Isetyenziswa ikakhulu kwimicu eluka ezinithiweyo, weft amalaphu ezinithiweyo, amalaphu ephothiweyo kunye amalaphu elastic.
I-Terylene yindidi ebalulekileyo yefayibha yokwenziwa, ekwaligama lorhwebo le-polyethylene terephthalate polyester fiber, esetyenziselwa amalaphu. IDacron, eyaziwa njenge "Dacron" e-China, isetyenziswa ngokubanzi ekwenziweni kwamalaphu eempahla kunye neemveliso zeshishini. Ipholiyesta enezinto ezintle kakhulu. Umsonto weplesterisi ocabaleleyo, ocoliweyo okanye ocoliweyo okanye ilaphu elenziwe emva kokumiswa kunokuhlala ixesha elide emva kokuba lihlanjwe kaninzi lisetyenziswa. IPolyester yenye yezi ntambo zintathu zokwenziwa kunye netekhnoloji elula kunye nexabiso eliphantsi. Ukongeza, yomelele kwaye yomelele, i-elasticity elungileyo, akukho lula ukuyikhubaza, ukumelana ne-corrosion, i-insulation, i-crisp, kulula ukuyivasa kwaye yomile, njl., Ethandwa ngabantu.
Kwimveliso yokutya yangoku, ishishini le-microelectronics, ishishini lamalahle, ishishini lokuprinta njalo njalo, iimpahla ezichasayo zisetyenziswa kakhulu kuzo, kwaye zidlala indima enkulu kwi-anti-static.
Njengoko sonke sisazi, njengeyona nto iphambili yokunxiba okungahambelaniyo: ilaphu elicocekileyo elichasene no-static, ukhetho lwayo luchaphazela umphumo we-anti-static wempahla emileyo. Njengenye amalaphu anti-static super ecocekileyo, ipholiyesta ilaphu yenziwe ngomsinga ipholiyesta uze ifayibha conductive olukiweyo longitudinally kwaye latitudinally, leyo yenziwe ubuchwepheshe processing ezizodwa. Isizathu sokuba uXiaobian acebise ukuba ukhethe ilaphu le-polyester anti-static kukuba ayisiyiyo kuphela into elungileyo yokusebenza ngokuchasene ne-static, kodwa ngokucacileyo iyathintela ifayibha yelaphu okanye uthuli olucolekileyo ukuba luwele ngaphandle komsantsa welaphu, kwaye ineempawu eziphezulu ukumelana nobushushu kunye nokumelana nokuhlamba; Isetyenziswa ngokubanzi kwigumbi elicocekileyo leBanga le-10 ukuya kwiBanga le-100. Isetyenziswa kakhulu kwimicroelectronics, kwii-optoelectronics, kwizixhobo ezintle nakwamanye amashishini achatshazelwa ngumbane ongashukumiyo kwaye afuna ucoceko oluphezulu.
Ngenxa yokuba ifayibha yopholiyesta yona inde kakhulu, ke akukho lula ukuvelisa iichips zewulu, kwaye uxinano lwelinen lukhulu, lunobungqina bokulunga nothuli. Iziphumo zokukhutshwa kombane kwilaphu kukuba ingaphakathi lelaphu lilungiswe ngocingo oluqhubayo (icarbon fiber wire) yomgama olinganayo, ukusuka kwi-0.5cm ukuya kwi-0.25cm.